I-LS Vision Netest Security Technology ekhonjiswe ku-Insermec Middle East 2016 eDubai
Kusukela ngo-17 - 19 Januwari, 2016 (ngoLwesibili - ngoLwesine), insermec Middle East 2016 ibanjelwe eDubai International Exhibition Center. Insersec midd ...
Kusukela ngo-17 - 19 Januwari, 2016 (ngoLwesibili - ngoLwesine), insermec Middle East 2016 ibanjelwe eDubai International Exhibition Center.
I-Inserc Middle East - Umbukiso kanye nengqungquthela yokuphepha, ukuphepha nokuvikelwa komlilo. Namuhla, umbono we-LS ububambe iqhaza e-Insermec Middle East, i-LS Vision ibonise abaningiI-CCTV yakamuva Ubuchwepheshe nekhamera, njenge Ikhamera ye-IP, isikhala esingu-360 panoramic IP Camera, ikhamera ye-Ahd Ptz, Uhlelo lwe-wifi nvr.
I-LS Vision- No.1 IP Ikhamera Umhlinzeki wemvelo enzima. Izinga lokushisa lamakhamera lifinyelela ku-40- + 70 degree. Ikhamera ye-LS Vision ikhangile inani elikhulu lamakhasimende abamba iqhaza, ikakhulukazi emakethe yaseMiddle East.
Nesiko lenkampani 'yempilo esezingeni eliphezulu', umbono we-LS uhlala ugcizelela imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nensizakalo enhle yamakhasimende, i-LS Vision inedumela eliphakeme kusuka kumakhasimende omhlaba, ngesikhathi sokubukwa okuningi kwe-LS wavakashela idokodo lethu futhi axoxe ngokubambisana nabanye.
Kusasa usuku lokugcina lombukiso, i-LS Vision ngobuqotho ukumema edokodo lethu: 1-H24 eDubai of Insermec Middle East 2016. Ekugcineni, i-LS Vision ngiyabonga kakhulu ngosizo oluphelele nokusekelwa okugcwele kusuka kumlingani wethu.
PHAMBI UKobe Bryant uVuits ngokusebenza kwe-Vintage 60-Point
Ukugubha iminyaka engu-100 yokusungulwa kweqembu lamaKhomanisi laseChina OLANDELAYO